Yoo maalimaan walfaannee deetaa filame, ajajni kun walfaannee deetaa qofa irratti hojjeta. Yoo maalimni hin filatamiin, ajajni kun walfaannee deetaa hunda irratti hojjeta.
Kan keessaAkaaku dogongoraaiddoo, akaaku dogongoraa mul'suu fi fiilanno adda addaa qaabda.
Kabalawwan dogongoraa herreeguuf faankishinii filadhu.
Dogongora Durtii: Dogongora durtii mul'isa.
Hangii mandhee cuqaasuun hangii mandhee gatiiwwan kabala dogongoraa poosativii fi negatiivii irraa fudhattu ifteessi .
Gabatee Deetaa Irraa
Lamaaniifuu gatii walfakkaatu
Poozatiivii fi Neegatiivii
Kabalawwan dogongoraa poozatiivii fi neegatiivii agarsiisa.
Kabalawwan poozatiivii qofa agarsiisa.
Kabalawwan neegatiivii qofa agarsiisa.